Real Madrid Oo Si Sahlan Ku Soo Garaacday Las Palmas, Gareth Bale Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Benzema Oo Kulankiisii 400-Aad Gool Ugu Dabaal Degay. – GOOL24.NET
Real Madrid Oo Si Sahlan Ku Soo Garaacday Las Palmas, Gareth Bale Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Benzema Oo Kulankiisii 400-Aad Gool Ugu Dabaal Degay.
Real Madrid ayaa guul wayn oo raaxo leh ka soo gaadhay kooxda halista wayn ugu jirta in ay heerka labaad u dhacdo ee Las Palmas waxaana kulankan laba gool ka dhaliyay Gareth Bale halka Karim Benzema uu kulankiisii 400 aad ee Madrid uu gool ugu dabaal degay.
Real Madrid ayaa si ku meel gaadh ah hal dhibic ugu soo jirsatay kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid oo aan wali kulankeeda ciyaarin waxayna Los Blancos 30 kulan ka heshay 63 dhibcood halka Atletico Madrid ay 29 kulan ku haysato 64 dhicbood.
Real Madrid ayaa doonaysay in ay sii wado dagaalka ay ugu jirto in ay kaalinta labaad ee horyaalka La Liga ay kala baxdo kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid wuxuuna Zidane shaxdiisa iu sameeyay isbadalo maadaama oo uu ka fikirayay kulanka Juventus ee Champions League iyada oo Las Palmas ay ka mid tahay kooxaha heerka labaad ka dagaalamaya.
Real Madrid ayaa qaybtii hore ee kulankan shaqadeeda sii qabsatay iyada oo dhibaato ku badan ku abuurtay kooxda daalaa dhacaysa ee Las Palmas oo uu macalinkeedu gaadhay go’aan saxaafada Spain hadal haysay oo ahaa in xidigo muhiim ah uu u dhigtay kulanka Levante maadaama oo aanu wax rajo ah ka qabin kulanka Madrid isla markaana uu diirada saarayay kulanka Levante oo iyaduna heerka labaad ka baxsanaysa.
DAQIIQADII 26 AAD Real Madrid ayaa heshay goolka ay dhibaatada wayn ugu abuurtay kooxda martida loo ahaa ee Las Palmas waxaana kubbad dilaa ah oo uu Luka Modric ka helay goolkan si qurux badan ugau dhaliyay Gareth Bale kaas oo difaaca Las Palmas ugu awooda sheegtay xawaarihiisa dheereeya, wuxuuna Blae ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Los Blancos goolka furitanka ku heshay.
DAQIIQADII 29 AAD Zinedine Zidane ayay qasab ku noqotay in uu shaxdiisa xili horeba isbadal ku sameeyo kadib markii uu dhaawac soo gaadhay Nacho Fernandez wuxuuna kaydka uga yeedhay da’yarka Achraf Hakimi.
DAQIIQADII 38 AAD REKOODHE Real Madrid ayaa rekoodhe lagu abaal mariyay kadib markii uu Vazguez cadaadis kala kulmay Calleri isla markaana uu calanwaduhu tilmaamay in qalad rekoodhe uu galay Calleri.
DAQIIQADII 39 AAD Karim Benzema oo saftay kulankiisii 400 aad ayaa qaatay masuuliyada rekoodhe tuurista kooxdiisa wuxuuna dhaliyay goolka labaad ee ay Los Blancos si buuxda awooda ciyaarta ay dhinaceeda u soo marisay isaga oo natiijada ciyaarta ka dhigay 2-0 ay Madrid ku xanuujisay Las Palmas.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid Real Madrid ayna dhibaato la kulmin waxayna sii go’amisay natiijada ciyaarta iyada oo qaybtii hore la gaadhin waxayna Las Palmas ahayd koox aan itaal u ahayb in ay laba gool ka soo kabsato.
DAQIIQADII 51 AAD REKOODHE Real madrid ayaa rekoodhihii labaad ee kulankan lagu abaal mariyay kadib markii Ximo Navarro uu qalad ku galay Gareth Bale, waxaana kubbada qaatay xidiga ree Wales kaas oo markiisa goolka saddexaad ee Madrid rekoodhahan ku dhaliyay wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Los Blancos ku dubanayso Las Palmas.
Intaa wixii ka dabeeyay waxay ciyaartu noqotay mid si buuxda loogu kala calaf qaaday oo ay Real Madrid saddexda dhibcood ku hubsatay jeebka sare halka Las Palmas ayna yeelan wax dhiiranaan ah oo ay ku gaadho shabaqa Madrid.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 ay Real Madrid ku sii dajisay Las Palmas oo ku jirta kooxaha ay suurtogalka tahay in ay heerka labaad ka ciyaari doonaan xili ciyaareedka soo socda.